बेलकाको भविष्य उज्वल बनाउन मेरो उमेद्वारी : प्रेम कुमार अधिकारी
वि.स. २०५३ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य भएको थिए । २०५४ सालमा जनता मावि गुरुङचौरीको इकाइ सचिव भए । वि. स. २०५५ सालमा जनता बेलका माविको इकाइ सभापति भए । त्यसपछि २०६२ सालमा नेपाल तरुण दलको जिल्ला कार्य समिति सदस्य भएको थिए ।
बिचमा पार्टी एकीकरण भएपछि एकीकृत नेपाल तरुण दलको २०६८ सालमा जिल्ला कार्य समिति सदस्य भए । १५ वर्षको उमेर देखि राजनीतिको मैदानमा निरन्तर लागिरहेँ । धेरै नेताहरूको जिवन पद्धति, उहाँहरूले गर्नुभएको संघर्षको गाथाबाट प्रभावित भएर र सबैभन्दा पहिला बीपि कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजबाद बिचारबाट प्रभावित भएर म कांग्रेसमा लागेको हुँ ।
मेरो बिचारमा राजनीति भनेको सेवा हो, राजनीति कर्मी जनताका सेवक हुन । शासक हैनन् । राजनीति संकारयुक्त हुनुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा जेठो पार्टी, गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टी, प्रजातन्त्रको जननी पार्टी, नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुन पाएकोमा मलाई गौरव छ । नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रलाई जिवन पद्धति हो भन्ने नेपाली जनतालाई बुझाउन सफल पार्टी हो ।
हतियारको माध्यमबाट हिंसाको राजनीति गर्नेलाई शान्ती पुर्ण बाटोमा ल्याउन सफल र मुलुकलाई रूपान्तरण गरेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल र मुलुकलाई रूपान्तरण गरेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ढाँचामा ल्याउने कुराको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो । त्यो पार्टीलाई आम रूपमा जनताले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ, संस्थागत रूपमा गुटहरू जिवित छन् ।
त्यो गुटहरूले गर्दा क्षमता भएका मानिसहरू, योग्यता भएका मानिसहरू, कर्म गर्न, सेवा गर्न आएका मानिसहरूलाई काही न काही छेकबार लगाइन्छ भन्ने कुरा छ । त्यो कुरालाई चिर्नका लागि राजनीतिको सबभन्दा प्रारम्भिक मैदान नगरकार्य समिति, जहाँ म यसपटक नेपाली कांग्रेसको एतिहासिक १४ औँ महाअधिवेशनमा नगर सभापतिको उमेद्वार छु ।
मैले चाहेको राजनीति संकारयुक्त हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका अहिले बेलका नगरपालिकामा ११०३ जना कृयाशिल सदस्य हुनुहुन्छ । बेलका ६० हजार भन्दा बढी जनसंख्या रहेको सम्भावित विकास उन्मुख नगरपालिका हो । यहाँको विकासका मोडलहरू, यहाँका विभिन्न राजनीतिक दल र आम जनसमुदायसँग व्यापक अन्र्तक्रियाद्वारा यो ठाउँको भविष्य सुन्दर बनाउनका निमित्त खासगरि आम युवाहरूको साथ र सहयोग र अग्रजहरूको आशिर्वाद आवश्यक छ । बेलकाको भविष्य उज्वल बनाउन लागि संघर्षको मैदानमा सहास, दृढ अठोट र संकल्प बोकेर मैले उमेद्वारी दिइरहेको छु ।
म निर्वाचित भएको तीन महिना भित्र दुई सय मतदाता बराबरको एउटा टोक कमिटी भन्ने अभियानलाई पुरा गर्नेछु । एकता, सहकार्य र सामुहिकतामा पार्टीलाई संचालन गर्ने हो । मैले नेपाली कांग्रेसमा विशेष उर्जा थप्न सभापतिमा उमेद्वारी दिएको हुँ ।
(राष्ट्रिय डेलीका लागि शिव प्रसाद लुईटेलले नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाअधिवेशनमा बेलका नगर सभापतिको उमेद्वार प्रेम कुमार अधिकारीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)